श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा हुन्छ ? यस्ता छन् ८ फाइदा - khulla Post
पुरुषोत्तम ढकाल १६ मंसिर २०७६, सोमबार ०८:०२ 2210 Views
एजेन्सी: कहिलेकाहीँ स–साना कुरामा पनि श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा हुने गर्दछ ।
कतिपय मानिस यस्तो झगडाले सम्बन्ध टुटाउने दाबी गर्छन् । तर यसमा सत्यता छैन । बरु श्रीमान्–श्रीमती बीचको झगडाले दुवैबीच माया बढाउँछ । आत्मियतासमेत बनाउँछ । तर झगडाको दौरानमा हातपात गर्ने, चिच्याउने वा गालीगलौज गर्नेहरु यस दर्जामा पर्दैनन् ।
दुई पार्टनरबीच हुने सामान्य झगडाले जोडीलाई एकअर्काको भावना र मान्यता बुझ्न मद्दत गर्छ । त्यसैले सातामा एकपटकसम्म हुने झगडाले श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध स्वस्थ र लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । श्रीमान्–श्रीमतीबीच हुने झगडाका फाइदाहरु निम्न छन् :
४. कतिपय समयमा केही कारणले बोलचाल बन्द भएमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच हुने झगडाले सबन्धमा नजिकपना ल्याउँछ । झगडाको कारणले नै बोलचाल खुल्दछ र दुबैबीच पुनः पुरानो सम्बन्ध फर्किन्छ । यसले दुई पार्टनरबीच अपनत्व र विश्वाससमेत बढाउँछ ।
५. वैज्ञानिकका अनुसार स्वस्थ सम्बन्धको एक कारक बहस वा झगडा पनि हो । त्यसैले झगडा हुँदैमा दुई बीचको सम्बन्ध खराब छ भन्न मिल्दैन । बरु कहिल्यै झगडा वा विवाद नगर्ने जोडीको सम्बन्ध धरापमा पर्ने गर्दछ ।
६. श्रीमान्–श्रीमती बीच हुने झगडामा कोही स्थायी शत्रु हुँदैनन् । त्यसैले यसमा हुने जीत वा हारले ठूलो महत्व राख्दैन । बरु झगडाका क्रममा माफी माग्ने पार्टनरले जीत हासिल गर्दछन् किनकी यसले उसको पार्टनरमा खुसी तुल्याउँछ ।
७. श्रीमान्–श्रीमती बीच हुने झगडाले मानिस आफ्नो पार्टनरप्रति कति बफदार वा केयर गर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यसमा पार्टनरले हातपात गर्छ कि, गालीगलौज गर्छ त्यसबारे समेत जानकारी पाउन सकिन्छ । यो स्थितिले आफ्नो पार्टनर कतिको सही छ, त्यसको मुल्याङ्कन गर्नेसमेत अवसर मिल्छ ।
८. कुनै पनि सम्बन्धमा सहज वातावरण हुँदैन । यसमा निजी विचारले प्रवेश पाउँछ । तर निजी विचार जबरजस्ती थोपर्नु हुँदैन । केही महत्वपूर्ण कुरा छ भने पार्टनरलाई त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्छ । यस्तोमा हुने झगडाले कहिलेकाही एकअर्कालाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ ।